သိပျခဈြလှနျးလို့ အဝေးမှာနဖေို့ ရှေးခဲ့တာပါ – Shinyoon
တဈဖကျသတျ . . . .
ကိုယျ့အနားမှာ မပြျောတဲ့လူတဈယောကျကို . . . ဆှဲထားရတာ အတေျာ့ကို ပငျပနျးပါတယျ ။ ရှိနစေခေငျြရုံစိတျတဈတညျးနဲ့ မနခေငျြတဲ့သူကို ကိုယျ့ဘကျကခညျြး ဆှဲထားမိတာလေ ။
မာနတှလေဲ မထားဖွဈခဲ့သလို သိက်ခာတှလေဲ မကနျြတော့တဲ့အထိအောကျကနြောကျကြ နိုငျခဲ့တဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျလဲ တဈခါတဈလကေတြော့ ဒေါသတှေ ထှကျမိတယျ ။ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှနေဲ့ ကိုယျတဈယောကျတညျး ရူးနမေိတာလေ ။
ခဈြလှနျးလို့ပါဆိုတဲ့ အဖွကေ လှဲလို့ တခွားဖွစေရာမတှခေဲ့ဘူး ။ ကိုယျ့ဘကျက ခဈြလှနျးလို့ ဂရုစိုကျမှုတှေ ကွငျနာမှုတှေ ကိုယျတတျနိုငျခဲ့တာတှထေကျ ပိုပွီး ပေးခဲ့ပမေယျ့ တဈဖကျက အသိအမှတျပွုဖို့နနေသောသာ မသိခငျြယောငျ ဆောငျနခေဲ့တာလေ ။
သူ့ကို ခဈြရတာ စိတျပငျပနျးရတယျ ။ အဝေးမှာ ရှိနတေဲ့အခါလဲ အဝေးမှာ ရှိနလေို့ စိတျမခြ ဖွဈရတယျ ။ အနီးမှာ ရှိနတေဲ့အခါလဲ သူ့စိတျ ကိုယျ့ဆီမှာ မရှိမှနျးသိလို့ ဝမျးနညျးရတယျ ။ ဘယျအခွအေနမှောပဲ ဖွဈဖွဈ ကိုယျပဲ ကွကှေဲရတာပါ ။
တဈခါတဈလကေပြွနျတော့တှေးမိပွနျတယျ ။ ကိုယျ့အခဈြတှကေ သူ့အတှကျ ဝနျထုတျဝနျပိုးတှပေဲ ဖွဈနမေလားလို့ ။ အရာရာမှာ ကိုယျ့ဘကျကခညျြး . . . တဈဖကျသတျ ဖွဈနခေဲ့တာလေ ။သူ့အတှကျ တဈခဏလောကျတောငျ ပြျောဖို့ မစှမျးနိုငျတဲ့အခါ . . . အဝေးမှာ ကနျြခဲ့ဖို့ပဲ တှေးလာမိတော့တယျ ။
အဝေးကနခေဈြလဲ အခဈြဆိုတာမှနျး ကိုယျလကျခံခဲ့ပွီးသားပါ ။ ရယူပိုငျဆိုငျမှ ကိုယျ့အနားမှာ ရှိနမှေ ခဈြနမေယျ့ မတ်ေတာမြိုးမှ မဟုတျတာ ။ အနားမှာ ရှိနပေါလားဆိုတဲ့ အသိလေးနဲ့ ပြျောခငျြခဲ့တဲ့ အတ်တကွောငျ့ တှယျကပျနခေဲ့မိတာပါ ။ အခုတော့ သူနဲ့ အဝေးဆုံးမှာပဲ ကနျြခဲ့ဖို့ တှေးပါတယျ ။
အရမျးကွီး ဖကျတှယျထားတာတှေ ၊ မနခေငျြမှနျးသိသိရဲ့နဲ့ ဖကျတှယျထားတာတှေ ရပျပဈလိုကျသငျ့ပွီလို့ ထငျပါတယျ ။ လူတဈယောကျအပျေါထားတဲ့ စိတျဆိုတာ အတငျးကွီးလုပျယူလို့ရတာမြိုး မဟုတျမှနျး လကျသငျ့ခံလိုကျပါပွီ ။ ခဈြလာဖို့ အနာကငျြခံပွီး မကွိုးစားတော့ဘူး ။ နောကျထပျ . . . လဈြလြူရှုမှု ဒဏျတှေ ဂရုစိုကျမခံရတာတှကေို ခံနိုငျဖို့ အငျအားတှေ မဲ့လာလို့ အဝေးမှာ ကနျြနခေဲ့ဖို့ကိုပဲ ရှေးပါတယျ ။
ဒီနကေ့ စလို့ . . . .မငျးအကောငျ့လေးကို Unfollow လုပျမယျ . . . ကိုယျ့အတှကျမဟုတျတဲ့ အရာတှေ . . . တကျလာတဲ့အခါ ကိုယျ့ကိုယျကို မနာကငျြမိအောငျပေါ့ ။ သတိရတဲ့အခါ My Day လေးကွညျ့မယျ မငျးပုံလေးတှေ ခိုးပွီး Save မယျ ။ သူပြျောနတောပဲ ဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့ ကိုယျလဲ ပြျောအောငျနဖေို့ အားမှေးရမယျလေ ။
တဈဖကျသတျအခဈြကွီးက အရမျးကို ခံစားရပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ မငျးသိထားပေးပါ မငျးကို ခဈြလှနျးလို့ . . . အဝေးမှာ နဖေို့ ကိုယျရှေးခဲ့မိတာပါ ဘဝထဲကနေ ထုတျမပဈရကျခဲ့သလို facebook ပျေါမှာလဲ Block မလုပျရကျသေးဘူး ။ ဒါတှေ မငျးမသိလဲ ဖွဈပါတယျ ။
တစ်ဖက်သတ် . . . .
ကိုယ့်အနားမှာ မပျော်တဲ့လူတစ်ယောက်ကို . . . ဆွဲထားရတာ အတော့်ကို ပင်ပန်းပါတယ် ။ ရှိနေစေချင်ရုံစိတ်တစ်တည်းနဲ့ မနေချင်တဲ့သူကို ကိုယ့်ဘက်ကချည်း ဆွဲထားမိတာလေ ။
မာနတွေလဲ မထားဖြစ်ခဲ့သလို သိက္ခာတွေလဲ မကျန်တော့တဲ့အထိအောက်ကျနောက်ကျ နိုင်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လဲ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ဒေါသတွေ ထွက်မိတယ် ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ရူးနေမိတာလေ ။
ချစ်လွန်းလို့ပါဆိုတဲ့ အဖြေက လွဲလို့ တခြားဖြေစရာမတွေ့ခဲ့ဘူး ။ ကိုယ့်ဘက်က ချစ်လွန်းလို့ ဂရုစိုက်မှုတွေ ကြင်နာမှုတွေ ကိုယ်တတ်နိုင်ခဲ့တာတွေထက် ပိုပြီး ပေးခဲ့ပေမယ့် တစ်ဖက်က အသိအမှတ်ပြုဖို့နေနေသာသာ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေခဲ့တာလေ ။
သူ့ကို ချစ်ရတာ စိတ်ပင်ပန်းရတယ် ။ အဝေးမှာ ရှိနေတဲ့အခါလဲ အဝေးမှာ ရှိနေလို့ စိတ်မချ ဖြစ်ရတယ် ။ အနီးမှာ ရှိနေတဲ့အခါလဲ သူ့စိတ် ကိုယ့်ဆီမှာ မရှိမှန်းသိလို့ ၀မ်းနည်းရတယ် ။ ဘယ်အခြေအနေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ပဲ ကြေကွဲရတာပါ ။
တစ်ခါတစ်လေကျပြန်တော့တွေးမိပြန်တယ် ။ ကိုယ့်အချစ်တွေက သူ့အတွက် ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေပဲ ဖြစ်နေမလားလို့ ။ အရာရာမှာ ကိုယ့်ဘက်ကချည်း . . . တစ်ဖက်သတ် ဖြစ်နေခဲ့တာလေ ။သူ့အတွက် တစ်ခဏလောက်တောင် ပျော်ဖို့ မစွမ်းန်ိုင်တဲ့အခါ . . . အဝေးမှာ ကျန်ခဲ့ဖို့ပဲ တွေးလာမိတော့တယ် ။
အဝေးကနေချစ်လဲ အချစ်ဆိုတာမှန်း ကိုယ်လက်ခံခဲ့ပြီးသားပါ ။ ရယူပိုင်ဆိုင်မှ ကိုယ့်အနားမှာ ရှိနေမှ ချစ်နေမယ့် မေတ္တာမျိုးမှ မဟုတ်တာ ။ အနားမှာ ရှိနေပါလားဆိုတဲ့ အသိလေးနဲ့ ပျော်ချင်ခဲ့တဲ့ အတ္တကြောင့် တွယ်ကပ်နေခဲ့မိတာပါ ။ အခုတော့ သူနဲ့ အဝေးဆုံးမှာပဲ ကျန်ခဲ့ဖို့ တွေးပါတယ် ။
အရမ်းကြီး ဖက်တွယ်ထားတာတွေ ၊ မနေချင်မှန်းသိသိရဲ့နဲ့ ဖက်တွယ်ထားတာတွေ ရပ်ပစ်လိုက်သင့်ပြီလို့ ထင်ပါတယ် ။ လူတစ်ယောက်အပေါ်ထားတဲ့ စိတ်ဆိုတာ အတင်းကြီးလုပ်ယူလို့ရတာမျိုး မဟုတ်မှန်း လက်သင့်ခံလိုက်ပါပြီ ။ ချစ်လာဖို့ အနာကျင်ခံပြီး မကြိုးစားတော့ဘူး ။ နောက်ထပ် . . . လျစ်လျူရှုမှု ဒဏ်တွေ ဂရုစိုက်မခံရတာတွေကို ခံနိုင်ဖို့ အင်အားတွေ မဲ့လာလို့ အဝေးမှာ ကျန်နေခဲ့ဖို့ကိုပဲ ရွေးပါတယ် ။
ဒီနေ့က စလို့ . . . .မင်းအကောင့်လေးကို Unfollow လုပ်မယ် . . . ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်တဲ့ အရာတွေ . . . တက်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မနာကျင်မိအောင်ပေါ့ ။ သတိရတဲ့အခါ My Day လေးကြည့်မယ် မင်းပုံလေးတွေ ခိုးပြီး Save မယ် ။ သူပျော်နေတာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ကိုယ်လဲ ပျော်အောင်နေဖို့ အားမွေးရမယ်လေ ။
တစ်ဖက်သတ်အချစ်ကြီးက အရမ်းကို ခံစားရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မင်းသိထားပေးပါ မင်းကို ချစ်လွန်းလို့ . . . အဝေးမှာ နေဖို့ ကိုယ်ရွေးခဲ့မိတာပါ ဘ၀ထဲကနေ ထုတ်မပစ်ရက်ခဲ့သလို facebook ပေါ်မှာလဲ Block မလုပ်ရက်သေးဘူး ။ ဒါတွေ မင်းမသိလဲ ဖြစ်ပါတယ် ။